japanSamachar | जापान जानकारी | जापान सरकारले परिवारलाई दिने दिने सेवा सुविधाहरु बुझिराख्नुस्
(Japan) 14 th April | 2021 | Wednesday | 5:50:06 PM || (Nepal) 2:35:06 PM
World 138097978 90954 2974387 3100 111110590 106040
Poland 2621116 21283 59930 803 2229801 3457
Austria 584205 2942 9779 31 544989 586
जापान सरकारले परिवारलाई दिने दिने सेवा सुविधाहरु बुझिराख्नुस्
POSTED ON : Saturday, 30 January, 2021 | Views : 5520
जापानमा बसोबास गर्दै आइरहेकाहरुले यहाँका सामाजिक कल्याण प्रणालीबारे सबै कुरा जान्न र बुझ्न जरुरी छ । यो प्रणाली जापानीहरु मात्रै नभएर यहाँ बसोबास गर्ने विदेशीहरुको सहयोगका लागि समेत बनाइएको छ । विशेषगरी, तपाई विवाह गर्ने वा बालबच्चा जन्माउने योजना बनाउँदै हुनु हुन्छ सहजै प्राप्त गर्न सकिने कयौं महत्वपूर्ण लाभ र भत्ताहरु छन् । आजको यस लेखमा यिनै सेवा सुविधा र भत्ताहरुबारे बताउन गइरहेका छौं । यहाँ जन्म देखि म’रणसम्म जीवनका हरेक चरणमा सबैका लागि सामाजिक भत्ता र सहुलियतहरु छन् ।
न्यून जन्म दर र वृद्ध बन्दै गइरहेको जनसंख्या यहाँको मुख्य सामाजिक समस्या नै हो । यी समस्याहरुको मुख्य कारण भनेको धेरैजसो मानिसहरु अविवाहित बस्नु र विवाह नै गरे पनि सन्तान नजन्माउनु हो । पछिल्लो समय विवाह नगर्ने युवाहरुको संख्या बढिरहेको छ । अनि धेरैजसोले सन्तानको चाहना नै राख्दैनन् ।
जापानको राष्ट्रिय प्रजनन सर्वेक्षण अनुसार १८ देखि ३४ वर्ष उमेरका ४० प्रतिशत अविवाहित महिला र पुरुष सहभागीहरुका लागि विवाहमा मुख्य तगारो आर्थिक भार हो । फलत सर्वेक्षणमा सहभागी २१ दशमलव २ प्रतिशत पुरुष र १५ दशमलव ३ प्रतिशत महिलाहरुले विवाह गर्ने विचार नै त्यागिदिएका छन् । यी समस्याहरु समाधान गर्न जापानले शृङ्खलाबद्ध रुपमा सामाजिक भत्ताहरु ल्याएको छ । जुन निम्नानुसार छन् ।
छिट्टै विवाहलाई प्रेरित गर्न नवविवाहितलाई प्रोत्साहन भत्ता
जन्मदर बढाउने प्रयासस्वरुप युवाहरुलाई विवाह र शिशु जन्माउन प्रेरित गर्न जापान सरकारले सन् २०१८ मा क्षेत्रीय भत्ता योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । विवाहको बेलामा ३४ वर्ष भन्दा कम उमेरका दम्पत्तिहरुले विवाह र नयाँ जीवन आरम्भका लागि भनेर वित्तीय सहायता प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
दुबै जनाको गरेर वार्षिक रुपमा कर पछि कूल ३४ लाख येन भन्दा कम कमाउने दम्पत्तिहरुले घर किन्न वा कोठा भाडा तिर्ने लगायत खर्चका लागि ३ लाख येन सम्मको सहुलियत पाउन सक्छन् । विवाह भइसकेका दम्पत्तीहरुले पनि यो लाभ पहिला लिएका छैनन् भने अब पनि यो लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यहाँ तपाईले याद गर्नु पर्ने कुरा के हो भने यो भत्ता अहिलेसम्म जापानभर उपलब्ध छैन । जापानका १ हजार ७२४ मध्ये २५७ शहरमा मात्रै यो कार्यान्वयनमा आएको छ । यससम्बन्धी थप जानकारीका लागि तपाई बस्ने क्षेत्रको सरकारी संस्थामा परामर्श गर्नुहोला ।
बाँझोपन उपचार अनुदान
एक जना वा दुबै दम्पत्ति बाँझो छन् वा गर्भधारण गर्न गाह्रो भइरहेको छ र भिट्रो फर्टिलाइजेशन, माइक्रो फर्टिलाइजेशन जस्ता उपचार आवश्यक छ भने सरकारले अतिरिक्त १ लाख ५० हजार येनको सहुलियत दिन्छ । यो हरेक वर्ष २ पटक लिन सकिन्छ ।
काम गर्ने महिलालाई सुत्केरी बिदा भत्ता
जापानको प्रसव र बालकल्याण प्रणाली निकै विकसित छ । यसमा नयाँ काम गर्ने आमालाई उत्कृष्ट लाभहरु पनि छ ।
जापानमा तलबी सुत्केरी बिदा ९८ दिनको छ । यसमध्ये ६ हप्ताको बिदा बच्चा जन्माउनु अघि र ८ हप्ताको बिदा भने बच्चा जन्माएपछि लिन पाइन्छ । नयाँ आमाको कम्पनीले यस अवधिमा तलब दिएन भने उसले सरकारलाई सहुलियतका लागि आवेदन दिन सक्छिन् । आफ्नो तलबको करीब दुई तिहाई रकम प्राप्त गर्न सक्छिन् । कम्पनीले तलबको केही अंश मात्रै दियो तर यो रकम आवश्यक भन्दा कम भयो भने बाँकी रकमको भर्पाई पनि सरकारले नै गरिदिन्छ ।
एक भन्दा बढी सन्तान जन्माउन प्रेरित गर्न तलबी शिशु स्याहार बिदा
सुत्केरी बिदा पछि पनि नयाँ अभिभावकहरुले शिशु स्याहार बिदा लिन सक्छन् । आफ्नो सुत्केरी बिदा सकिएपछि शिशुको पहिला जन्मदिन नआएसम्म घरमै बस्ने कामकाजी आमाहरुले सरकारबाट पहिलो १८० दिनसम्म आफ्नो तलबको करीब ६७ प्रतिशत रकम बराबरको रोजगार बिमाबाट पाउन सक्छन् ।
बाँकी रहेको बिदाको अवधिका लागि भने तलबको करीब ५० प्रतिशतसम्मको रकम रोजगार बीमाबाट पाउन सकिन्छ । बच्चा हुर्काउन घरमै बस्ने पिताहरुले पनि यस प्रणालीबाट आफ्नो तलबको ५० प्रतिशतसम्म रकम पूर्तिका लागि आवेदन दिन सक्छन् । जस्तैः दैनिक ८ हजार येन कमाउने अभिभावकले १० महीनाको बिदा लिएको छ भने करीब १२ लाख येन सहुलियत पाउन सक्छन् । यो भन्दा बढी तलब हुनेले भने बढीमा मासिक २ लाख १५ हजार येनसम्म पाउन सक्छन ।
यस बाहेक पनि जापान सरकारले १२ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका घरपरिवारलाई मासिक रुपमा शिशु स्याहार भत्ता दिन्छ । प्रति शिशु मासिक रुपमा दिइने भत्ता निम्नानुसार छ ।
० – ३ वर्ष का शिशुका लागि प्रति शिशु १५ हजार येन
३ वर्ष देखि प्राथमिक विद्यालय जाने उमेरका पहिलो शिशुको लागि १० हजार येन, दोस्रोको लागि १० हजार येन र तेस्रो शिशुको लागि १५ हजार येन र एवम् रितले ।
माध्यमिक विद्यालय जाने उमेरका शिशुको लागि १० हजार येन ।
बच्चा जन्माउन प्रेरित गर्न एक मुष्ठमा शिशु जन्म भत्ता
जापानमा नयाँ आमाहरुले बच्चालाई जन्म दिएपछि ४ लाख २० हजार येनसम्म सहुलियत पाउन सक्छन् । जुम्ल्याहा बच्चा जन्माउने आमाको लागि भने यो रकम ८ लाख ४० हजार येन रहेको छ । जुन देशकै नागरिक भएपनि जापानमा बस्ने जो कोहीले यो अनुदानका लागि आववेदन दिन सक्छन् । तर विदेशीहरुले भने यसका लागि निम्नलिखित शर्त पूरा गरेको हुनु पर्छ ।
१. सरकार वा रोजगारदाताकहाँ स्वास्थ्य बीमा योजनामा आबद्ध भएको हुनु पर्नेछ ।
२. गर्भ तुहियो, समय नपुग्दै शिशु जन्मियो, मृ’त शिशु जन्मियो वा गर्भपात नै गर्नु पर्यो भने पनि महिलाको पेटमा ८५ दिनभन्दा बढी समयसम्म भ्रण रहेको अवस्थामा ।
यो अनुदान सुत्केरी गराउन खर्चको भर्पाई गर्न सिधैं अस्पतालमा पठाउन सकिन्छ । आवेदकको अनुमति पछि प्रतिपूर्तिका लागि आवेदकको खातामा पनि स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । रोजगारदाताले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य बीमा योजनामा आबद्ध भएकाहरुका लागि भने सहुलियत रकम यो भन्दा पनि धेरै हुन सक्छ ।
शिशु जन्माउन प्रेरित गर्न वैकल्पिक नगद प्रोत्साहन
जापानको निश्चित क्षेत्रमा स्थानीयहरुलाई बच्चा जन्माउन थप प्रोत्सान दिइन्छ । यस्तो प्रोत्साहन प्राय नगदमा हुन्छ । क्षेत्र अनुसार यस्तो रकम दशौं हजार येन देखि १० लाख येनसम्म छ । जस्तै होक्काइदोेले स्थानीय बासिन्दाहरुलाई पहिलो बच्चाको लागि ५० हजार येन, दोस्रोको लागि २ लाख येन र तेस्रोको लागि १० लाख येन दिन्छ । यस सन्दर्भमा प्राप्त रकमको करीब ३० प्रतिशत स्थानीय स्तरमा मात्रै प्रयोग गर्न सकिने गिफ्ट कूपनको रुपमा आउँछ । तपाई बस्नु भएको क्षेत्रको स्थानीय सरकारले पनि यस्तो प्रोत्साहन दिन्छ कि खोज तलास गर्नुहोस् हैं ।
एकल अभिभावक भएको परिवारका लागि विविध शिशु भत्ता
माथि बताइएको भत्ता र सुविधा बाहेक पनि एकल अभिभावक भएका परिवारमा बच्चा हुर्काउनेका लागि अन्य सहुलियत पनि छन् । १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका पहिलो दोस्रो र तेस्रो सन्तानका लागि ४० हजार देखि ६० हजार येनसम्म मासिक अनुदान उपलब्ध छन् । एक्लैले बच्चा हुर्काउने अभिभावकले जापानमा धेरै चिन्ता नै गर्नु पर्दैन भने पनि हुन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएको मासिक सामान्य भत्ता बाहेक पनि विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाका न्यून आए भएका परिवारले विद्यालय र जीवन सहयोगी सहुलियतका लागि पनि आवेदन दिन सक्छन् । ताकि ट्यूशन र अन्य साना तिना खर्चको भार कम होस् । यस्ता बाहेक पनि असक्त र अपांग बालबालिका भएका अभिभावकहरुले मासिक ३३ हजार ८ सय देखि ५० हजार ७५० येनसम्मको असक्त भत्ता पाउन सक्छन् ।
बोनस – लमीको भूमिका निर्वाह गरेबापत इनाम ?
जापानको केही ग्रामीण क्षेत्रहरुले लमीलाई पारिश्रमीकरइनाम दिने रमाइलो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । आजभोली युवा पुस्ताहरु ग्रामीण क्षेत्र वा नगर क्षेत्रभन्दा बाहिर बस्न रुचाउँदैनन् । आफ्नो खुट्टामा उभिने उमेरमा पुगेपछि कयौं युवाहरु आप्नो गृह नगर छाडेर शहरमा बस्न रुचाउछन् ।
यसका कारण जापानमा जनसंख्या वितरणमा असमानता देखिएको छ भने क्षेत्रीय ग्रामीण उद्योगहरु कामदारको अभावमा बिलाउँदै गइरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रहरुमा जनसंख्या घटेकै कारण विवाहका लागि उपर्युक्त वरवधु पाउन मुस्किल छ । त्यसैले केही शहरहरुले लमीलाई ५० हजार येनदेखि २ लाख येनसम्मको इनाम दिइरहेका छन् । तर यो इनाम पाउन त्यति सजिलो भने छैन । किनकी यो इनाम पाउन लमीले जोडी मिलाइदिएको दम्पत्ति स्थायी रुपमा नै गाउँमा नै बस्नु पर्छ भन्ने शर्त पूरा हुनुपर्छ ।